लकडाउन असर दुर्घटनाको जोखिममा बालबालिका छन् : डाक्टर – Chitwan Post
भरतपुर । लकडाउनको समयमा बालबालिकाहरू यतिखेर घरमै छन् । केही घरभित्रै खेलिरहेका छन् भने केही घरबाहिर लुकीछिपी खेलिरहेका छन् । विद्यालय बन्द हुँदा चञ्चले उमेरका बालबालिकाहरूमा थप खतरा देखिएको छ ।
भरतपुर अस्पतालका अर्थोपेडिक कन्सल्टेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले घरभित्रै पनि खेल्दा, दौडँदा बालबालिकाहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेको बताए । ‘मोबाइल, टिभी, इन्टरनेटजस्ता भुलाउने साधन भए पनि बालबालिकाहरू खेल्न, डुल्न रुचाउँछन्’, उनले भने, ‘जति केयर गरे पनि दुर्घटना हुने गरेको छ ।’
पढ्ने, खेल्ने, चकचक गर्ने बालबालिकाको उमेरगत स्वभाव नै भएको उनले बताए । अलाइभ हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर भरतपुरका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अर्थोपेडिक कन्सल्टेन्ट डा. प्रमोद लामिछानेले अस्पतालमा लकडाउनअघि गाडी दुर्घटना र अन्य प्रकृतिका दुर्घटनाका घाइते आउने गरेको भन्दै पछिल्ला दिनहरूमा बालबालिकाहरू हातखुट्टा भाँचिएर आउने गरेको बताए ।
‘घरमा दौडँदा, खेल्दा, उफ्रँदा बालबालिकाहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्’, डा. लामिछानेले भने, ‘अहिले अस्पतालमा आउने घाइतेको प्रकृति हेर्दा उमेर समूहका आधारमा बालबालिकाहरू रहेको पाइन्छ ।’ बालबालिकाका हरेक गतिविधिमा अभिभावक चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले सुझाए ।
लकडाउन भए पनि डढेलो रोकथामको काम जारी